WEBSITE T&Cs | Wentworthonline
Biko gụọ usoro na ọnọdụ ndị a nke ọma tupu i jiri saịtị a.
Kedu ihe dị na usoro ndị a?
Usoro ndị a na -agwa gị iwu maka iji webụsaịtị anyị https://www.wentworthonline.co.uk/ (saịtị anyị).
Pịa na njikọ ndị dị n'okpuru ka ị gakwuru ozi ndị ọzọ na mpaghara ọ bụla:
Onye anyị bụ na otu esi akpọtụrụ anyị.
Site n'iji saịtị anyị ị na -anabata usoro ndị a.
Enwere usoro ndị ọzọ nwere ike ịmetụta gị.
Anyị nwere ike mee mgbanwe na usoro ndị a.
Anyị nwere ike ime mgbanwe na saịtị anyị.
Anyị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ wepu saịtị anyị.
Anyị nwere ike nyefee onye ọzọ nkwekọrịta a.
Saịtị anyị bụ naanị maka ndị ọrụ nọ na UK.
Kedu otu ị ga -esi jiri ihe dị na saịtị anyị.
Ịdabere na ozi na saịtị anyị.
Anyị abụghị ndị ọrụ maka weebụsaịtị anyị jikọtara na ya.
Ọrụ anyị maka mfu ma ọ bụ mmebi nke gị tara ahụhụ.
Mwepu ibu maka ọdịnaya dijitalụ.
Otu anyị nwere ike isi jiri ozi nkeonwe gị.
Anyị abụghị ndị ọrụ maka nje na ị gaghị ebute ha.
Iwu gbasara ijikọ saịtị anyị.
Kedu iwu obodo nke metụtara esemokwu ọ bụla?
Onye anyị bụ na otu esi akpọtụrụ anyị
https://www.wentworthonline.co.uk/ bụ saịtị nke Wentworth Primary School ("Anyị") na -arụ. E debanyere aha anyị na England na Wales n'okpuru nọmba ụlọ ọrụ 07899198 ma nwee ọfịs anyị edebanyere aha na Wentworth Primary School, Wentworth Drive, Dartford, Kent DA1 3NG. Adresị ahịa azụmaahịa anyị bụ Wentworth Primary School, Wentworth Drive, Dartford, Kent DA1 3NG
Ofsted na -achịkwa anyị.
Iji kpọtụrụ anyị, biko zitere email office@wentworth.kent.sch.uk.
Site n'iji saịtị anyị ị na -anabata usoro ndị a
Site n'iji saịtị anyị, ị na -egosi na ị nabatara usoro ojiji a yana na ị kwenyere irube isi na ha.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro ndị a, ịgaghị eji saịtị anyị.
Anyị na -akwado ka ị bipụta otu mkpụrụ okwu ndị a maka ntụnye n'ọdịnihu.
Enwere usoro ndị ọzọ nwere ike ịmetụta gị
Usoro ojiji ndị a na -ezo aka na usoro mgbakwunye ndị a, nke metụtakwara n'iji saịtị anyị:
Iwu Nzuzo anyị - nke enwere ike ịhụ https://www.wentworthonline.co.uk/policies .
Amụma ojiji ojiji anyị, [njikọ] nke na -akọwapụta ikike a machibidoro na ojiji amachibidoro saịtị anyị. Mgbe ị na -eji saịtị anyị, ị ga -esorịrị n'iwu a na -anabata nke ọma.
Iwu kuki anyị, nke na -akọwa ozi gbasara kuki na saịtị anyị.
Anyị nwere ike mee mgbanwe na usoro ndị a
Anyị na -emegharị usoro ndị a site n'oge ruo n'oge. Oge ọ bụla ịchọrọ iji saịtị anyị, biko lelee usoro ndị a iji hụ na ị ghọtara okwu ndị na -emetụta n'oge ahụ.
Anyị nwere ike ime mgbanwe na saịtị anyị
Anyị nwere ike imelite ma gbanwee saịtị anyị site n'oge ruo n'oge. Anyị ga -anwa ịnye gị ọkwa ezi uche maka mgbanwe ọ bụla.
Anyị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ wepu saịtị anyị
Enyere saịtị anyị n'efu.
Anyị anaghị ekwe nkwa na saịtị anyị, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla dị na ya, ga -adị mgbe niile ma ọ bụ bụrụ nke anaghị akwụsị akwụsị. Anyị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ wepu ma ọ bụ machibido nnweta nke ihe niile ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke saịtị anyị maka ebumnuche azụmahịa na arụmọrụ. Anyị ga -anwa ịnye gị ọkwa ezi uche dị na nkwụsị ọ bụla ma ọ bụ mwepu ego.
Ị nwekwara ọrụ ịhụ na ndị niile na -enweta saịtị anyị site na njikọ ịntanetị gị maara usoro ojiji ndị a yana usoro na ọnọdụ ndị ọzọ dabara adaba, yana na ha na -eso ha.
Anyị nwere ike nyefee onye ọzọ nkwekọrịta a
Anyị nwere ike nyefee nzukọ ọzọ ikike na ọrụ anyị n'okpuru usoro ndị a. Anyị ga na -agwa gị mgbe niile ederede ma ọ bụrụ na nke a emee, anyị ga -ahụkwa na nnyefe agaghị emetụta ikike gị n'okpuru nkwekọrịta.
Saịtị anyị bụ naanị maka ndị ọrụ nọ na UK
Edebere saịtị anyị maka ndị bi na United Kingdom. Anyị anaghị anọchite anya ọdịnaya dị na ma ọ bụ site na saịtị anyị kwesịrị ekwesị maka ojiji ma ọ bụ dị na ebe ndị ọzọ.
Kedu otu ị ga -esi jiri ihe dị na saịtị anyị
Anyị bụ ndị nwe ma ọ bụ onye nyere ikikere ikike ikike ọgụgụ isi niile na saịtị anyị, yana n'ihe edepụtara na ya. Iwu nke nwebisiinka na nkwekọrịta gburugburu ụwa na -echedo ọrụ ndị ahụ. Edebere ikike niile dị otu a.
Ị nwere ike bipụta otu mbipụta, ma nwee ike ibudata mpụta, nke ibe (ibe) ọ bụla na saịtị anyị maka ojiji nkeonwe gị ma ị nwere ike ịdọrọ uche ndị ọzọ nọ n'ime nzukọ gị na ọdịnaya ezigara na saịtị anyị.
Ị gaghị agbanwe akwụkwọ ma ọ bụ mbipụta dijitalụ nke ihe ọ bụla i biputere ma ọ bụ budata n'ụzọ ọ bụla, ị gaghịkwa eji ihe atụ, foto, vidiyo ma ọ bụ usoro ọdịyo ma ọ bụ eserese ọ bụla dị iche na ederede ọ bụla so.
Ọnọdụ anyị (yana nke ndị enyemaka ọ bụla akọwapụtara) dị ka ndị dere ọdịnaya na saịtị anyị ga -ekwenye mgbe niile.
Ị gaghị eji akụkụ ọ bụla nke ọdịnaya dị na saịtị anyị maka ebumnuche azụmahịa na -enwetaghị ikikere ime ya n'aka anyị ma ọ bụ ndị nyere anyị ikike.
Ọ bụrụ na ị bipụta, detuo ma ọ bụ budata akụkụ ọ bụla nke saịtị anyị na imebi usoro ojiji ndị a, ikike gị iji saịtị anyị ga -akwụsị ozugbo, ị ga -emerịrị, na nhọrọ anyị, weghachite ma ọ bụ bibie akwụkwọ ọ bụla nke ihe ndị ị mere.
Atụkwasịla obi na ozi saịtị a
Enyere ọdịnaya dị na saịtị anyị maka naanị ozi izugbe. Ezubeghị ya ka ọ dabere na ndụmọdụ nke ị kwesịrị ịdabere na ya. Ị ga -enwerịrị ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụ ọkachamara tupu ị were, ma ọ bụ zere, omume ọ bụla dabere na ọdịnaya dị na saịtị anyị.
Agbanyeghị na anyị na -eme ezi mbọ iji melite ozi dị na saịtị anyị, anyị anaghị enye ihe nnọchite anya, nkwa ma ọ bụ nkwa, ma ekwuputara ma ọ bụ gosipụtara, na ọdịnaya dị na saịtị anyị ziri ezi, zuru oke ma ọ bụ ka ọ dị ugbu a.
Anyị abụghị ndị ọrụ maka weebụsaịtị anyị jikọtara na ya
Ebe saịtị anyị nwere njikọ na saịtị ndị ọzọ na akụrụngwa nke ndị ọzọ nyere, a na -enye njikọ ndị a maka ozi gị naanị. E kwesịghị ịtụgharị ụdịrị njikọ dị ka nkwado nke weebụsaịtị ma ọ bụ ozi ị nwere ike nweta n'aka ha.
Anyị enweghị ikike maka ọdịnaya nke saịtị ma ọ bụ akụrụngwa ndị ahụ.
Ọrụ anyị maka mfu ma ọ bụ mmebi nke gị tara ahụhụ
Ma ị bụ onye na -azụ ahịa ma ọ bụ onye na -azụ ahịa:
Anyị anaghị ewepu ma ọ bụ kpachie n'ụzọ ọ bụla ụgwọ anyị nwere n'ebe ọ ga -abụ iwu megidere ime ya. Nke a gụnyere ụgwọ maka ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ nke nleghara anya anyị kpatara ma ọ bụ nleghara anya nke ndị ọrụ anyị, ndị nnọchi anya ma ọ bụ ndị na -ere ahịa ya na maka wayo ma ọ bụ ịkọwa ụgha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ azụmaahịa:
Anyị na -ewepu ọnọdụ, nkwa, ihe nnọchite anya ma ọ bụ usoro ndị ọzọ nwere ike itinye na saịtị anyị ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla dị na ya.
Anyị agaghị atụ gị ụgwọ maka mfu ma ọ bụ mmebi ọ bụla, ma ọ bụ na nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere nleghara anya), ịda iwu nke iwu, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enwere ike ịhụ ya, na -ebilite n'okpuru ma ọ bụ na njikọ na:
ojiji, ma ọ bụ enweghị ike iji, saịtị anyị; ma ọ bụ
ojiji ma ọ bụ ịdabere na ọdịnaya ọ bụla egosipụtara na saịtị anyị.
Karịsịa, anyị agaghị aza ajụjụ maka:
mfu nke uru, ahịa, azụmahịa, ma ọ bụ ego ha nwetara;
mfu nke ichekwa ego echere;
mfu nke ohere achụmnta ego, ihu ọma ma ọ bụ aha ọma; ma ọ bụ
mfu ma ọ bụ mmebi ọ bụla na -apụtachaghị ìhè.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na -azụ ahịa:
Biko mara na anyị na -enye saịtị anyị naanị maka iji ụlọ na nkeonwe. Ị kwenyere ka ị ghara iji saịtị anyị maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla, anyị enweghịkwa ụgwọ ọ bụla maka mfu uru ọ bụla, mfu nke azụmahịa, nkwụsị ahịa, ma ọ bụ mfu ohere azụmahịa.
Otu anyị nwere ike isi jiri ozi nkeonwe gị
Anyị ga -eji ozi nkeonwe gị naanị dị ka edepụtara na amụma nzuzo anyị.
Ị bụ naanị ọrụ maka ịchekwa na ịkwado ọdịnaya gị.
Anyị anaghị echekwa ọdịnaya ndị na -eyi ọha egwu.
Anyị abụghị ndị ọrụ maka nje na ị gaghị ebute ha
Anyị anaghị ekwe nkwa na saịtị anyị ga -anọ na nchekwa ma ọ bụ pụọ na chinchi ma ọ bụ nje.
Ọ bụ gị ka ịhazi teknụzụ ozi gị, mmemme kọmputa na ikpo okwu iji nweta saịtị anyị. Ịkwesịrị iji sọftụ nchedo nje gị.
Ị gaghị eji saịtị anyị eme ihe n'ụzọ na -ezighị ezi site n'ịma ụma webata nje, trojans, ikpuru, bọmbụ mgbagha ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị njọ ma ọ bụ na -emebi teknụzụ. Ị gaghị anwa ịnweta saịtị anyị na -enweghị ikike, sava nke echekwara saịtị anyị ma ọ bụ sava ọ bụla, kọmputa ma ọ bụ nchekwa data jikọtara na saịtị anyị. Ịkwesighi ịwakpo saịtị anyị site na mwakpo nke ịgọnarị ọrụ ma ọ bụ mwakpo nke ịgọnarị ọrụ. Site na imebi iwu a, ị ga-eme mpụ dịka Iwu Iwu Mmebi Kọmputa si dị 1990. Anyị ga-ezigara ndị isi mmanye iwu dị mkpa yana ụdị mmebi a, anyị ga-ejikọkwa aka na ndị ọchịchị ahụ site na ikpughere ha njirimara gị. Ọ bụrụ nmebi dị otu a, ikike gị iji saịtị anyị ga -akwụsị ozugbo.
Iwu gbasara ijikọ saịtị anyị
Ị nwere ike jikọta na ibe akwụkwọ anyị, ma ọ bụrụhaala na ị na -eme ya n'ụzọ ziri ezi yana iwu na -agaghị emebi aha anyị ma ọ bụ jiri ya mee ihe.
Ị gaghị eguzobe njikọ n'ụdị nke ga -egosi ụdị mkpakọrịta ọ bụla, nkwado ma ọ bụ nkwado n'akụkụ anyị ebe ọ na -adịghị.
Ị gaghị eguzobe njikọ na saịtị anyị na webụsaịtị ọ bụla na -abụghị nke gị.
A gaghị ahazi saịtị anyị na saịtị ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ị nwere ike mepụta njikọ n'akụkụ ọ bụla nke saịtị anyị na -abụghị ibe obibi.
Anyị debere ikike ịdọrọ ikike njikọ na -enweghị ọkwa.
Ebe nrụọrụ weebụ nke ị na -ejikọ ga -enwerịrị irube isi na ụkpụrụ niile dị na amụma ojiji eji anabata anyị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijikọ ma ọ bụ jiri ọdịnaya ọ bụla na saịtị anyị na -abụghị nke akọwapụtara n'elu, biko kpọtụrụ: office@wentworth.kent.sch.uk.
Nkwekọrịta a, isiokwu ha na nhazi ha (yana esemokwu ọ bụla na-abụghị nkwekọrịta ma ọ bụ nkwupụta) bụ iwu Bekee. Anyị abụọ kwenyere na ikike nke ụlọ ikpe nke England na Wales.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na -eji nọmba kuki. A kuki bụ obere faịlụ nke mkpụrụedemede na ọnụọgụ nke anyị tinyere na kọmputa gị ma ọ bụrụ na ị kwenyere. Ndị a kuki kwe ka anyị mara gị n'etiti ndị ọrụ webụsaịtị anyị, nke na -enyere anyị aka ịnye gị ahụmịhe dị mma mgbe ị na -agagharị na webụsaịtị anyị ma na -enyekwa anyị ohere imezi saịtị anyị. [Ihe kuki anyị na -eji bụ "nyocha" kuki. Ha na -enye anyị ohere ịmata ma gụọ ọnụọgụ ndị ọbịa na ịhụ ka ndị ọbịa si agagharị na saịtị ahụ mgbe ha na -eji ya. Nke a na -enyere anyị aka imeziwanye ụzọ weebụsaịtị anyị si arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ site n'ịhụ na ndị ọrụ na -achọta ihe ha na -achọ n'ụzọ dị mfe.] [Anyị anaghị ekerịta ozi ahụ kuki zukọta na ndị ọzọ ọ bụla.]
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na -eji kuki iji mara gị n'etiti ndị ọrụ nke weebụsaịtị anyị. Nke a na -enyere anyị aka ịnye gị ahụmịhe dị mma mgbe ị na -agagharị na weebụsaịtị anyị yana na -enyekwa anyị ohere imezi saịtị anyị.
Kuki bụ obere faịlụ nke mkpụrụedemede na ọnụọgụ nke anyị na -echekwa na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ draịvụ ike kọmputa gị ma ọ bụrụ na ị kwenyere. Kuki nwere ozi nke agafere na draịvụ kọmputa gị.
Anyị na -eji kuki ndị a:
Kuki nyocha ma ọ bụ arụmọrụ. Ndị a na -enye anyị ohere ịmata ma gụọ ọnụọgụ ndị ọbịa yana ịhụ ka ndị ọbịa si agagharị na webụsaịtị anyị mgbe ha na -eji ya. Nke a na -enyere anyị aka melite ụzọ weebụsaịtị anyị si arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, site n'ịhụ na ndị ọrụ na -achọta ihe ha na -achọ ngwa ngwa.
Kuki ọrụ. A na -eji ndị a amata gị mgbe ị laghachiri webụsaịtị anyị. Nke a na -enyere anyị aka ịhazi ọdịnaya anyị maka gị, kelee gị n'aha wee cheta mmasị gị (dịka ọmụmaatụ, asụsụ ma ọ bụ mpaghara gị).
Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara kuki nke anyị na -eji yana ebumnuche anyị ji ha na tebụl dị n'okpuru:
Eji ya maka nchekwa
Ejiri ya na nbanye onye ọrụ
Eji ya gosi usoro nke esitere na saịtị ahụ
Eji ya maka nleba anya/nchapu sistemụ
Eji ya maka ọkọlọtọ ọkọlọtọ kuki
Ejiri iji chọpụta ndị sonyere na saịtị
Eji ya mee ihe maka nchekwa na mgbochi aghụghọ
A na -eji ya maka ịlele arụmọrụ sistemụ
Eji ya maka nkwụsi ike/ịdị irè
Eji ya na webụsaịtị asụsụ dị iche iche iji chekwaa mmasị asụsụ onye ọrụ
Eji ya mata ndị ọrụ.
Ị nwere ike igbochi kuki site na ịgbalite ntọala na ihe nchọgharị gị nke na -enye gị ohere ịjụ ntọala nke kuki niile ma ọ bụ ụfọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ijiri ntọala ihe nchọgharị gị igbochi kuki niile (gụnyere kuki dị mkpa) ị nwere ike ị gaghị enwe ike ịnweta ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke weebụsaịtị anyị.
Ewezuga kuki dị mkpa, kuki niile ga -agwụ mgbe afọ 2 gachara.